Ny bitro dia manana salohim-bidy tsara: antony hanaovana ny zavatra tokony hatao - Biby fiompy - 2019
Nahoana ny bitro no mafana sy mangatsiaka?
Tsy misy biby azo tsaboina toy ny bitro. Ireo bibikely mitaingina ireo dia manohitra amin'ny fahadisoana kely indrindra amin'ny tompony, ary ny mpiandraikitra rehetra dia mety hitarika ho amin'ny aretina matotra na ny fahafatesan'ny biby fiompy rehetra mihitsy aza. Na dia izany aza dia misy fomba tsotra ahafahana mamantatra haingana ny fiovan'ny toetr'andro. Mba hanaovana izany, mikasika ny sofiny lava.
Marika famantarana aretina
Nahoana no bitika be ny bitro?
Psoroptosis na fanesorana
Nahoana ny bitro no mihaino sofina
Ny fiantraikan'ny hafanana eo amin'ny bitro
Ny ravina dia azo tsapain-tanana amin'ny fihenan'ny hafanana, ary noho izany dia mila miezaka mafy ireo biby mafana ireo mba hihazonana ny mari-pana vetivety. Mahagaga, ela be, hatramin'ny antsasaky ny halavan'ny vatana, ny sofina dia mila ny bitro tsy ilaina akory mba hahafantarana ny loza amin'ny fotoana sy ny fihetsik'izany, fa amin'ny fifehezana thermal.
Fantatrao ve? Raha mandositra ny loza dia mety hahatratra 72 km / h ny haavon'izany, ka mahatonga azy ho tsy azo ekena ho an'ny ankamaroan'ny mpihaza. Na izany aza, dia tena mamitaka ny tsy fahampian-tsakain'ny bitro iray, ny havany akaiky amin'ny sakaizany. Raha ilaina, dia afaka mihetsika haingana amin'ny 56 km / h ny biby, ka olona 44 km / h ny haavony, ary ny haingam-pandeha haingam-pandeha mitafo tsara dia mihoatra ny 20 km / h, tsy misy ny vintana alao ny biby fiompinao, raha te hiala amin'ny tompony izy.
Nipoitra tamin'ny ranom-boan-dra maromaro ny alikan'ny bitra iray, saingy tsy misy volon'ondry mihintsy. Ity rafitra ity dia mamela ny biby hampiasa ny sofina ho toy ny karazana conditioner amin'ny hafanana sy ny fitaovana fanadiovana mandritra ny vanin-taona mangatsiaka.
Toy izao no ataony:
Raha mafana ilay biby dia mihamitombo ny tahan'ny rà ao amin'ny sofiny ary manomboka mamakivaky ra be dia be, izay mihodina amin'ny sofina matevina sy mangatsiatsiaka, mihamihena tsikelikely noho ny fifandraisana amin'ny rivotra ary miverina amin'ny vatan'ny biby, mampitombo ny dingan'ny fandaminana.
Rehefa mitabataba ilay biby, dia mitranga ny mifanohitra amin'izany: mihatra ny rà mandriaka ary ny ra dia mivezivezy amin'ny alalan'ireo taova voaaro amin'ny felana matevina matevina, mitazona ny hafanan'ny hafanana ao anatin'ny vatana.
Na izany aza, rehefa "mandoaka" amin'ny sofina ny rà, dia lasa ambany noho ny hafanana amin'ny vatan'ny biby ny fandrenesany, ary rehefa mihetsiketsika ny sofina dia mihamahazo vatana.
Fantatrao ve? Mahaliana ihany koa, toy izany koa, ny rambony lava amin'ny voalavo sy ny tandrok'ilay ombidia afrikana, ankole-vatusi, dia manampy amin'ny fitondrana ny hafanana.
Noho izany, ny hafanan'ny vatan'ny hain-pahasoavana dia mitoetra ho tsy miovaova foana (raha oharina amin'ny habetsaky ny hafanan'io biby io dia miova kely arakaraka ny vanim-potoana: amin'ny 38,8-39,5 ° C ara-normaly, amin'ny ririnina dia mety hianjera amin'ny 37 ° C , ary amin'ny fahavaratra dia hitsangana hatramin'ny 40-41 ° C), fa ny sofina dia mety ho mangatsiaka na mafana be, raha manala na mihinana ilay biby.
Ny sofina goavambe matetika dia miteraka olana goavana amin'ny bitro, ka lasa moka amin'ny karazana aretina isan-karazany. Ny fisian'ny zavatra tsy mety amin'ny sofin'ny biby dia azo tsapaina amin'ny soritr'aretina manaraka (iray na mihoatra):
Mihamaro ny earwax manomboka mihaona amin'ny sofina, izay amin'ny ankapobeny dia mihitsoka tanteraka ny lakandran-tsofina;
Mihena ny sofina;
mena, ratra, fery, fery, fôsily sy fery, rakotra rongony na rà mitsi-doha, na havoana kely mihodina anaty rano, feno ranom-boasary, izay mamotipotika amin'ny farany, mamela scabs amin'ny aty anaty boribory, ary indraindray koa amin'ny hodi-maso;
ny sofina dia mafana ary ny tendron'ny orona dia maina;
Matetika no mihozongozona ny lohany, matetika dia miezaka manosotra ny sofiny amin'ny tongony, manosotra azy amin'ny lozam-pirahalahiana rehetra eo amin'ny manodidina, amin'ny teny iray, araka ny fihetsika amin'ny biby, mazava ho azy, ny aretina dia miaraka amin'ny fery mangotraka;
Ny sofina dia mipetraka foana;
ny lohan-dalitra dia mianjera foana na mitsivalana;
Mampitombo ny hafanan'ny vatan'ny biby manontolo ny biby;
Matetika ny bitro no mifoka rivotra;
manjary masiaka sy malemy ny biby, na mifanohitra amin'izany aza, miteraka alahelo sy tsy misy fitsaharana;
ny fahaverezan'ny fiankinan-doha na ny fandavana tanteraka ny sakafo;
ny fandavana ny vehivavy amin'ny fanangonana, ny fihenan'ny asa momba ny fananahana;
fahaverezan'ny fandrindrana ny biby.
Ny sofina tsara ao amin'ny bitro dia mety vokatry ny antony roa:
Tsy sarotra ny manavaka ireo antony roa ireo - ny ilainao fotsiny dia ny manombana ny fahasambarana ankapobeny amin'ny biby. Raha tsy mampiseho marika amin'ny fihetsika mahasosotra ilay bryd, tsy manana ny soritr'aretina voalaza etsy ambony izy, dia tsy tokony hisavorovoro ianao. Mety ilaina ny mampihena kely ny hafanan'ny rivotra ao amin'ny efitrano izay itehirizana ny biby.
Zava-dehibe izany! Ny fitomboan'ny hafanam-po amin'ny hafanan'ny vozona dia mety tsy ho avy amin'ny rivotra mafana, fa amin'ny fanentanana mihoatra noho ny famporisihan'ny biby. Ny sofina dia manomboka manadio ny vatan'ny biby, toy ny fahatsapan'ny rivotra ny vatan'ny olona mandritra ny fanatanjahan-tena mavitrika.
Azonao atao ny mampihena ny hafanan'ny vatan'ny biby an-tsokosoko amin'ny alahelovanao amin'ny sofiny ny sofiny amin'ny gaza na ny napkin taloha alohan'ny hidirany ao anaty rano amin'ny faran'ny efitra fisakafoana (tsy misy mangatsiaka, raha tsy izany dia hitombo ny fantson-dra, hampidina ny fifindran'ny hafanana ao amin'ny vatana). Ankoatr'izay dia mila mitandrina tsara ianao fa tsy midina ao amin'ny lakandran-tsofina ny rano. Ireo asa ireo dia tsy fitsaboana, fa ny fanampiana voalohany amin'ny biby ihany. Raha tsy voafetra amin'ny sofina mena ny toe-javatra mahazo azy, aloha aloha dia ilaina ny mametraka ny diagnostika marina.
Psoroptose, na maratra, dia aretina iombonana amin'ny bitro. Ny fitaovana enti-miasa dia ny Psoroptos cuniculi mite. Izy, tahaka ny parasy hafa mpandatsa-dra, dia tena tian'ny ankamaroan'ny fantson-dra izay manampy ny saka handositra ny hatsiaka sy ny hafanana. Ny rà mandriaka miaraka amin'ny rambony dia manimba ny fahamendrehan'ny vatana ivelany ao amin'ny lakandranon'i ivelany, ary ankoatra izany dia manaparitaka ny biby amin'ny poizina izay navotsotra nandritra ny asa lehibe nataony. Vokatr'izany, ny bryd dia marevaka marefo, ary ny tompony dia afaka mandinika ireo soritr'aretina hafa amin'ny psoroptosis araka ny lisitra etsy ambony. Amin'ny dingana taty aoriana dia mety ho very ny toerany ao amin'ny habakabaka ilay biby, izay manondro ny fifindran'ny aretina amin'ny sofina afovoany sy anatiny. Ankoatra izany, ny hoditry ny tsoka dia lasa fitaovana fanafihana mikroflora iray hafa, anisan'izany ny streptococci, staphylococci sy ny bakteria hafa mikorontana, izay indraindray mitarika amin'ny fampiroboroboana ny meningitis manify sy ny fahafatesan'ny biby.
Ny vanim-potoan'ny psoroptose dia maharitra hatramin'ny iray na dimy andro. Ny aretina dia afaka manenjika bitro amin'ny vanim-potoana rehetra, saingy ny biby matetika mihoatra ny efa-bolana no mety aminy. Ny aretina dia avy amin'ny marary, ary mihanaka haingana ny fipoahana: rehefa maniry na mivembena ny lohany, miaraka amin'ny ravina hoditra hoditra, mivoaka ny sofina ary manatona avy hatrany amin'ny bitro hafa.
Zava-dehibe izany! Psoroptos cuniculi dia tsy manasitrana ny olona, ​​ka ny olona dia tsy afaka ny ho voan'ny aretina avy amin'ny bitro, fa mety hampiditra ny biby fiompiny amin'ny fitondrana ny aretin'io aretina mampidi-doza io amin'ny akanjony na kiraro.
Mba tsy hijerena tsara ny psoroptose, dia tsy ilaina ny fitsirihana laboratoara. Ny fampiasana plastika plastika na zavatra hafa mety, dia ilaina ny manala kely amin'ny hoditra maty eo amin'ny sisin'ny rindrin'ny bitro, mametraka azy ao anaty voankazo matipaika mialoha ny 40 ° C (ohatra ny gazy solika) ary mitandrema tsara amin'ny vera. Ny haben'ny Psoroptos cuniculi dia mihoatra ny antsasak'i milimetatra, na izany aza, dia azo atao ny mijery ny fitaratra magnifying sy ny olon-dehibe, ary na dia ny lavany aza. Rehefa hita fa misy soritr'aretina voafaritra tsara, dia maika ny hanomboka fitsaboana. Mba hanaovana izany dia azonao ampiasaina ny fomba nentim-paharazana na ny fampiasana sivily bebe kokoa ny fanafody ofisialy, na izany aza, raha ny marina, ary amin'ny toe-javatra iray hafa, aloha dia ilaina ny manala volo tsara sy volo ny hoditra hoditra avy amin'ny lozam-pifamoivoizana, rehefa nanalefaka ny hoditra tamin'ny peroxyde (rano) Na izany na tsy izany, ny sehatra nipoitra ihany no nesorina).
Fantaro ny karazana fery amin'ny sofina bitro.
Ny fitsaboana nentim-paharazana dia manolotra ireto safidy fitsaboana manaraka ireto ho an'ny fahasimban'ny sofina ao amin'ny bitro:
Ampiharo amin'ny glycerine sofina amin'ny alikaola 5% (1: 4 ratio) ny alikaola. Avereno isan'andro ny fitsaboana alohan'ny famerenana tanteraka.
Isan-andro, manadio ny faritra voan'ny aretina amin'ny alàlan'ny kamboty.
Manamboara menaka na tsaram-borona (terpents) miaraka amin'ny menaka voajanahary ao anaty tahan'ny 2: 1 ary mibontsina ny menaka nomena amin'ny sofina. Io zava-mamy io dia mampidi-doza ho an'ny fampiasana isan'andro, ny fomba fitsaboana dia azo averina aorian'ny roa herinandro.
Tahaka ny tao amin'ny recipe teo aloha, tokony haka lohasaha sy menaka voajanahary ianao, fa amin'ny ampahany mitovy, ampidiriny ao anaty famolahana ny creoline tsy misy fôlônôla tsy misy fôlôn amin'ny volavolan-dalàna mitovy amin'ny an'ireo singa roa hafa. Ny Creolin dia manana fiantraikany amin'ny akarizidala, ao anatin'izany ny momba ny Psoroptos cuniculi. Teny ampiasaina isan'andro.
Ny fitsaboana maoderina dia manome vahaolana be dia be amin'ny fampiasana zava-mahadomelina kokoa noho ny aretina. Indrindra, misy fanafody maromaro hita ao anaty bateria, izay mahatonga azy io ho mora sy haingana hampihatra ny fanafody fa tsy mampifangaro ny singa mamy loatra ary avy eo manasitrana ireo faritra voan'ny aretina amin'ny vatan'ny biby mampihorohoro amin'ny tavy lavalava na ny fitaovana fanatsarana hafa.
Lahatsary: ​​fitsaboana psoroptose amin'ny bitro
Ny fanafody toy izany dia, ohatra:
Fantatrao ve? Ny trondro rehetra dia tsy azo hatsangana, mihazona ny sofina. Matetika ny biby no atahorana mivoaka avy eny amin'ny rivotra, ka mahatonga azy hiteraka korontana ny hery misintona ny bitro ary mety hahatonga aretina. Afaka manaisotra biby eo an-tananao ianao avy eo ambany, ka midina ao aminy mba hahafahan'ilay fluffy hahita izay mitranga aminy.
Tsy misy fanafody tsy dia mahomby, novokarina tamin'ny endriky ny diplaoma sy ny emulsions, izay manara-maso ny endriky ny sofina arakaraka ny teknolojia voalaza etsy ambony momba ny fomba fitsaboana nentim-paharazana. Ity lisitra ity dia tokony ahitana ireto fitaovana manaraka ireto:
Ao amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny aretina, ny fampiharana iray amin'ireo fanafody voalaza etsy ambony ireo dia ampy ho an'ny fitsaboana; amin'ny tranga efa tranainy, ny fitsaboana dia atao indroa isaky ny ora 1-2 herinandro (araka ny torolalana). Ankoatr'izany, ny fitsaboana ny psoroptose amin'ny bitro dia azo avy amin'ny fitsaboana (ny fampidirana dia manjavozavo ao amin'ny ratra, tsy mitongilana ao amin'ny feny, na mivantana mivantana). Ny fanafody nampiasaina tamin'izany:
Zava-dehibe izany! Ho an'ny bitra bevohoka, dia tsy mifanaraka amin'ny fampidirana ireo injections ireo, fa ny fanafody ihany no mitondra ny fanafody.
Mifanohitra amin'ny psoroptosis, ny otrikaretina otitis ao amin'ny bitro dia virosy. Ny soritr'aretin'ny aretina dia tena mitovy amin'ny sofina amin'ny sofina, nefa mety hitera-doza (aretim-pivalanana) ihany koa. Tsy misy fanamafisana ny soroka. Fanamarihana hafa momba ny otitika mihetsiketsika ny fihodinan'ny biby tsy mendrika ny masony. Raha toa ka tsy voatsabo ny bibikely iray na ny lavany mandritra ny fandalinana ny fanasitranana ny sofina, dia maneho koa ny viriosy ny aretina. Ny aretina virosy dia tsy azo atao mihitsy ny manasitrana ny zava-mahadomelina, fa ny antibiôtika dia mbola aseho amin'ny tranga toy izany, satria matetika ny biby mafampana dia lasa niharam-pahavoazana amin'ny fisintonana mikroflora isan-karazany. Ny fitsaboana dia tanterahana amin'ny fampidirana fanafody manohitra ny fanafody manoloana ny sofina, fanesorana ny sofina amin'ny Zoderm na Otodepinom, ary koa ny fisidinan'ny Cefabol, Oxytetracycline sy ireo mpanafika antibiotika hafa (asan'ny veterinarianina).
Zava-dehibe izany! Ny fandaharan'asa sy ny fikarakarana ny otitis volo dia tsy azo atao afa-tsy ny veterinariana, tsy tokony hampiasa antibiotika ianao, izany dia mety hiteraka fahafatesan'ny biby, ary koa ny fananganana antibiotika-tosidran'ny bakteria.
Raha sofina marevaka ao amin'ny bitro dia porofon'ny hafanan-drivotra na ny fampiroboroboana aretina mifindra, dia midika izany fa famantarana kely amin'ny hypothermie ny fihenan'ny temitra an'io taova io. Amin'ny tranga goavana dia mety hipoitra mihitsy aza ny sofina: ny rà dia tsy mivezivezy amin'ny fantson-dra, ary ny ankamaroany dia mitoetra ao amin'ny vatana ary mamonjy azy amin'ny hypothermia, vokatr'izany dia manomboka manimba sy maty ny vatan'ny sofina. Ny hatsiaka amin'ny sofina bitro dia mandeha amin'ny dingana telo:
Ny sofina dia mangatsiaka, mena ary mivonto. Eto amin'ity sehatra ity dia miteraka fanaintainana mafy ny biby.
Mipoitra eo amin'ny sofina ireo boka, izay mamoaka lavaka, mamoaka ranon-drivotra mihosin-dra. Ny volon'ondry eo ivelan'ny sofina dia mihintsana, tsy afaka hitazona azy ireo intsony ny bitro.
Eo amin'ny sofina dia misy faritra mihamalemy - ny fihodinana amin'ny necrosis.
Mba hisorohana ny hafanam-po tanteraka amin'ny sofina sy ny hanomezana ny biby amin'ny fanampiana voalohany, ilaina ny manosotra moramora ny sofina mangatsiaka amin'ny tananao, ary avy eo dia mandraraka azy ireo miaraka amin'ny tavy (tsy misy hafanana) matavy. Afaka mampiasa kisoa na gisa ianao. Ao amin'ny dingana faharoa amin'ny aretina, mila manokatra ireo bitsibitsika, ary mametaka ny faritra voakasika amin'ny kamiao, penicilline na menaka yoda. Amin'ny ambaratonga fahatelo, ilaina matetika ny manasokajy ny sofina na ny ampahany aminy.
Zava-dehibe izany! Na ahoana na ahoana, dia tokony hapetraka ao anaty efitrano mafana ny marika iray misy marika manjelanjelatra mandra-pahavoazana tanteraka.
Mba hisorohana ny olana amin'ny heniheny biby mampihetsi-po, dia diniho tsara ireto fitsipika misoroka manaraka ireto:
Ny mari-pana ao amin'ny efitrano izay voatazona ny bitro dia tokony hiezaka mafy mba hahazoana mari-pahaizana tsara indrindra eo amin'ny +15 ka hatramin'ny +17 ° C (eo ambanin'ny +10 ° C sy ambony +25 ° C - fanavakavahana tsy azo ekena avy amin'ny fitsipika);
Amin'ny vanim-potoana mafana dia tokony homena rano betsaka araka izay azo atao ny bitro, mba hahazoana antoka fa kely ny hafanana, ary hampihenana ny hafanana amin'ny efitra hampiasana ny fitaovana rehetra ilaina - ohatra, mba hametrahana tavoahangy plastika amin'ny rano mangatsiaka ao anaty cages;
Tsy azo sakanana eo akaikin'ny varavaran 'ny masoandro ny cages miaraka amin'ny bitro, izay ahafahan'ny biby mampihetsi-po be, tsy afaka miafina amin'ny hafanana;
Ny fandefasana tsy tapaka ny efitrano dia tsy maintsy ampanaovina ny bitro;
Manome ny biby fiompiny miaraka amina sakafo matsiro be, ahitra na trozona maina;
mitandrina ny fitsipika momba ny fikarakarana ny biby - manadio ny tranom-bahiny sy ny mpamatsy, manova ny fako maloto, manadio ny sisa tavela amin'ny sakafo ary manova ny rano ao amin'ireo mpiboboka;
mametraka karantsaina roa isan-kerinandro ho an'ny biby vaovao rehetra;
fametrahana fe-potoana fitsaboana biby fiompy;
tsy hamela ny biby an-tseza ao amin'ny bitro na ny tranom-borona;
Manara-maso ny bitro amin'ny fanafody antiparasitika ho an'ny tetikasam-pampianarana;
Manaova fanaraha-maso tsy tapaka ny olona tsirairay avy amin'ny andian'ondriny ary mametraka avy hatrany ny biby izay mbola misy marika famantarana kely amin'ny karantany.
Ny fahasamihafana sy ny hafatry ny sofin'ny bitro dia karazana fampahalalana momba ny fahasalaman'ny biby. Raha manova tanteraka ny hafanany ny sofin'ny biby dia famantarana izany fa misy zavatra tsy mety amin'ny toetrany. Tsy misy na inona na inona mety hitranga tsy hijery an'io soritraretina io.
Vakio koa ny momba ny fananganana bitro amin'ny sofina.
Raha tsy misy famantarana famantarana marary, dia ilaina ny mandinika ary, raha ilaina, hanitsy ny mari-pana ao amin'ny efitrano izay itehirizana ny biby, fa ny fisian'ny soritr'aretin'ny aretina sofina dia antony iray handraisana fepetra maika sy ilaina mba hanampiana ny olona voakasika sy hisorohana ny fihanaky ny otrik'aretina amin'ny mpikambana hafa.
Ny ravina Geranium dia mihodina mavomavo avy eo amin'ny sisiny, ary marefo ny tsimokaretina: maninona no maina ny voninkazo ary inona no tokony hatao?
Nahoana no marefo ny karaoty? Sary sy mpitsidika zaridaina, inona no tokony hatao mba hamonjena ny vokatra
Rantsana ombin-kena sy ronono
Ny tombony amin'ny fampiasana rano fanondrahana eny amin'ny dacha
Ny fiterahana eo amin'ny fiainana
Akanjo fitondra amin'ny soavaly; Fa ahoana no anaovanao amin'ny tananao?
Miaraka amin'ny akoho: famantarana, fepetra mifehy sy fisorohana
Pyrey manonja: ahoana no ahafahana manala ny ahi-dratsy amin'ny tranokala iray
Japoney zana-katsaka an'ny akoho Chabo: famaritana, toetra, fiompiana
Tselatra marevaka sy mangatsiaka Rose tomato: famaritana isan-karazany, sary, toro-hevitra mitombo
Firy ny bitro no mandanja ary inona no entina hanangonany azy
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Nahoana ny bitro no mafana sy mangatsiaka?